स्त’न मसाज गर्दा महिलालाई के-के फाइदा हुन्छ ? - Mitho Khabar
April 27, 2020 mithokhabarLeaveaComment on स्त’न मसाज गर्दा महिलालाई के-के फाइदा हुन्छ ?
महिलाहरुले आफुलाई फिट राख्नको लागि अनेक मेहनत गर्छन । महिलाहरु आफू सुन्दर हुनका लागि ब्युटिपार्लर जान्छन् । फेसियल, स्क्रब र विभिन्न खाले अनेक उपाय अपनाउँछन् । आफ्नो स्वास्थ्यको लागी महिलाहरु जिम जाने, योगा गर्ने र स्वस्थ खाना खान्छन् ।
तर, आफ्नो स्त’नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा चाँहि धेरैजस अनभिज्ञ नै हुन्छन् । केहि अध्ययनले स्तन स्वस्थ राख्न स्त’नको मसाज गर्नु लाभदायक हुने देखाएको छ । मसाज यौ’न अानन्दको लागि मात्र नभएर स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुने अध्यनबाट देखाएको छ ।
जब महिलाहरुले कसिलो लुगा विशेषगरी ब्रा लगाउँछन तब ब्रे’स्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको काममा रोकावट आउँछ । जसले गर्दा ब्रेस्ट र अन्डर आम्र्समा भएको लिम्फ वा लसीका फ्लुइडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि स्त’न मसाज गर्नु आवश्यक छ ।
कहिलेकाहीं स्त’नमा गाँठो परेको पनि हुनसक्छ तर यो आफैलाई थाहा नहुनसक्छ । यस्ता गाँठो विस्तारै क्या’न्सरमा परिणत हुनसक्छ । नियमित स्त’न मसाज गर्यो भने आफैले गिर्खा वा गाँठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरुन्त उपचार भई ख’तराबाट बच्न समेत सहज हुन्छ ।
कसरी गर्ने स्तन मसाज ?
खास गरेर बदामको तेल, तिलको तेल, जोजोबा आयल वा क्यास्टर आयलले स्त’न मसाज गर्नु बढी फाइदाजनक हुन्छ । यस्तै, नुहाइ सकेपछि हातमा तेल लगाएर हातले स्त’न माथी गोलाकारमा मसाज गर्नुहोस् नुहाउन चाहानुहुदैन भने स्त’नलाई तातो तौलिया राखेर हल्का तातो गनुहोस्।
मसाजको मोशनलाई झण्डै ३० पटक सम्म माथी र तलको दिशामा पनि गर्नुपर्छ । यति नै भन्ने छैन तर १० देखि १५ मिनेट हरेक दिन सुत्नु भन्दा पहिले स्त’न मसाज गर्नु लाभदायक हुन्छ । एजेन्सी
March 26, 2020 March 26, 2020 Arjun Thapa